Gurigaaga qurxi xilliga Ciida – SomaliaOne News Network
Sep 09, 2016 Hussein Nur BANDHIGGA 0 1775 Views By Hussein Nur
Guri daaqadihiisa lagu qurxiyay dhir.
Hablaha si gaar ah Hooyooyinka , waxaa laga doonayaa inay guryahooda qurxiyaan xilliyada munaasabaha , sida Ciidul Fitri iyo Ciidul Adxaa , xilligaasi oo dad qaraabo ah ama dad kale ay u soo martin karaan.
Fadhi yar oo lagu qaxweeyo oo dhir lagu hareereeyay.
Hagaaji gurigaaga , si gaar ah qolalka fadhiga , jiifka , barxadda iyo jardiinooyinka si muuqaalka guriga u noqdo mid ka duwan sidii lagu yiqiinnay , adiga oo sameynaya waxa loo yaqaan ” Decoration” aan ku baxeyn qarash buuran.
Dhir iyo ubaxyo ku qurxi gurigaaga , haddii uu leeyahay balakoon furan ama barando waa mid aad wax weyn ka badali kartid quruxdii hore .
Fadhi kooban oo dhir iyo ubaxyo lagu qurxiyay.
Sidoo kale , daaqadaha banaanka guriga ku aadan ayaa ubaxyo sida saaq saaqa oo kale ugu wareejin kartaa oo ay ku lamaansan yihiin leerar yaryar oo midabo kala duwan leh, taasi oo u muujin karta farxadda reerka guriga iyo damaashaadka ciida.
Ciidul Adxaa, Ciidul Fitri
Muddo Xileedkii Sharciga ahaa ee Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo Dhammaaday Qaraha oo faa'idooyin kala duwan u leh hablaha uurka leh
Dadka Muqdisho oo aan u dabaal degeyn...
Qaraha oo faa’idooyin kala duwan u leh hablaha uurka leh
Qaraha waa geed mirood saaqa ah, mirihiisu waxa ay leeyihiin midab qurxoon, qolofkiisa sarana waa cagaar , guduhuna waa guduud...